Yini Izithakazelo? – iAfrika
Izithakazelo ziyigugu nendlela lokuzigqaja kulowo osuke ebizwa ngolibo lwamaqhawe akubo. Ngisho kungathiwa umuntu usethukuthele wagana unwabu, uma uke wambiza ngesithakazelo samhlaba siye siyithunge maphakathi inhliziyo uzibone izihlathi zivakashela izindlebe. Zonke izizwe zabeNguni zinezibongo. Izibongo lezo zihambisana nezithakazelo.
Izithakazelo zehluka ngokuthi zona zihambisana nesibongo sabantu abanenkaba yozalo. Izithakazelo lezi zisuselwa emagameni nasezibongweni zokhokho besibongo esithile. Uma umuntu ethakazela uyaye aqale kokhokho, kokunye athinte nomlando walowo esuka emthakazela. Empeleni isithakazelo yigama likakhokho othile ohlotsheni lolo. Lokho kwenza ukuba isithakazelo sifane nesibongo. Phela isibongo naso igama lomuntu, kwesinye isikhathi isithakazelo noma isibongo siqhamuka ngesenzo esithizeni. Sizwe Hlongwane Reference: uzspace.uzulu.ac.za
Tags Clan names, Izibongo, Izithakazelo
7 thoughts on “Yini Izithakazelo?”
Mina ngasacela umlando nezithakazelo zakwa Makhunga
21/08/2019 at 19:06
Mhlawumbe uma ungaqala uke usitshele lezo zithakazelo zakwaMakhunga ozaziyo, noma zingeziningi zimbalwa, kuyosiza lokho kwabanalo ulwazi lomlando wakwaMakhunga, nabo sebokwenenezela ngendlela abazi ngayo. Uma besho ekhaya kwenu baye bathi zithini izithakazelo zakwaMakhunga?
30/11/2016 at 00:59
Bengithanda ukwazi izithakazelo zakwaNdlovu (umkhandela)
13/09/2016 at 12:18
Mina bengithanda ukwazi isibongo nomlando wakwambogwa kanye nezithakazelo
08/09/2016 at 11:23
Mina ngyathanda ningichazele ngomlando nje wakwaDlamini(onkosi, Mlangeni, sibalukhulu,,,,,,) bengingajabula yazi uma ngingawazi nje
11/07/2016 at 15:12
Ngithanda ukwazi ngemvelaphi yabakwa Gabela
23/03/2016 at 15:22
Ngiyathanda ukwazi ngezithakazelo zakwa Shezi nesibongo.
Nokuty kungabe bawuhlobo luni lomuntu.(#Umzulu,Ibhaca etc)